I-24 Enhle yeSamurai Tattoos Iingcamango Zomntu - i-Tattoos Art Ideas
I-24 Enhle ye-Samurai Tattoos I-Ideal Design For Men
Ngaba uyazi indlela i-tatrau tattoo ibonakala ngayo? Siye sabona amadoda namabhinqa angena kubalimi bengenalo ingcamango yento abayifunayo ngokwenene kwiinki zabo. Unokusombulula njani le ngxaki? Xa ubona i-tatrai, ucinga ukuba uye wafika kwihlabathi lezobugcisa
I-Samurai tattoo yilelo tattoo efumana ikhowudi engabonakaliyo ebizwa ngokuba yi-bushido-ithetha iindlela zokuphila. I-bushido ineengxenye ezisixhenxe ezibalulekileyo ezithetha ngeSamurai. I tattoo ibonisa inhlonipho, inhlonipho, ububele, ukunyaniseka, ukunyaniseka kunye nentliziyo. I tattoo isetyenziselwa ukuthetha ngokukrakra, amandla kunye nobutyebi. Ingabonakaliswa kwizinto ezingabonakaliyo kwaye eziyingqayizivele njenge-octopus, i-koi fish kunye ne-octopus ukumela ukhuseleko, uncedo kunye nesibindi.
I-#Samurai tattoo yenze ngcono ukuba abantu babamele abalingani babo abanoyiko nabanobhali. Bafanekisela amandla namandla. I tattoo ingaba ngamadoda kwaye amadoda ayakuthanda ukuyisebenzisa ekuphumeleleni ukulwa kunye nokufa. USamurai #tattoo uthetha ngobuntu bomntu obembetheyo. Umnxeba unokuba ngumfazi kwaye uthatyathwe ngentliziyo ngabafazi. Intsingiselo yeSamurai inokuhamba ixesha elide ukuxelela abanye ibali ongenakukwazi ukuyithetha.
1. I-cool cool samamura tattoo kumlenze wesilisa
2. I-samurai ye-heroic tattoo ingcinga yabantu
Xa ufumana umculi wakho we-Samurai warrior, uyaqiniseka ukuba uya kuhlonelwa ngenxa yento okholelwayo kunye nento ofuna ukuyifumana kulobu bomi.
3. Ama-Samurai aseJapane tatto kumadoda
Uza kubona yonke imifanekiso ye-samurai yaseJapan # ukudlula kwi-intanethi kwaye isele ukuba wenze ukhetho lwakho. Unokuxelela ukuba le tattoo ibonakala imangalisa kwaye imnandi.
Okukhethiweyo ukufumana itayimusi ye tattoo yinto engafanele ihlaselwe. I tatouto yeSamurai njengolu hlobo luza kuhlala ekhanyeni lakho nantoni na eseleyo ebomini bakho ngenxa yokuba ibukeka njani buhle.
4. I-samurai izixhobo zokubamba tattoo
Amanqaku amakhanda asetyenziso lwe-tattoo aluyi kufezwa ngumbhali onokuyifumana kakuhle. Xa ufuna ukufezekisa le tattoo, kufuneka uqinisekise ukuba yonke into ofuna ukuyenza iyanyamekelwa ngumculi wakho wokubhala ngaphambi kokuba uqale ukudweba.
5. AmaSamamura amaphephelo amaqhawe omboniso we tattoo ngcamango yokuba abafana
Ngaphambi kokuba ufumane lo mdlalo othandekayo waseSamurai, qiniseka ukuba ufumana isikhokelo esivela kumculi wezandla ngaphambi kokuba ufumane nayiphi na indlela okanye uhlawule enye itayiti engafanelekanga.
6. Ama-Samurai aseJapane atyhila umzobo weendoda kunye namagxa
Ukuba ucinga ukuba unobumba be-samurai wenziwe, ngoko wenze isisombululo esilungileyo ngokusebenzisa olu qulunqo ukuze wenze ngokwezifiso uyilo lwakho. Konke okufuneka ukwenze kukuba uqale ngoyilo lwakho kunye nomsebenzi wonke unokufezekiswa ngenkxaso yombonisi.
7. I-samurai skull tattoo kumahlombe amadoda
Unokholo lokuba uphawu lweSamurai skull lunento enxulumene nobugcisa okanye inkcubeko. Nantoni na okholwayo akufanele ifake isigwebo sakho xa kufike ekufumaneni umboniso othandekayo njengaye.
8. I-Samamura emangalisayo ikrele lomdwebo wesandla ngesandla
Abantu abambalwa bangadinga ukufumana ummangaliso wabo we-samurai ngekrele lobunqamlezo emzimbeni wabo.
9. Iqhawe likaSamurai elinomkhonto wektoti emlenzeni
10. I-Tiger kunye neSamray warrior design tattoo ehlombe
Xa ufuna ukutshintsha indlela obukeka ngayo, ungasebenzisa le tiger kunye ne-Samurai warrior design tattoo ehlombe lakho. Ithemba uyayithanda
11. Isiqingatha se-Samurai inkemba kunye ne-armor tattoo design idea malunga namakhwenkwe
Iqonga elincinci le-Samurai lekrele kunye ne-armor design tattoo ayikwazi ukufezwa ngaphandle kokuba uncedise umculi wakho weenki kwiinki uyilo lwakho.
12. Umdlali okhuselekileyo we-Samurai warrior nge-tiger tattoo design idea kubafana
13. Icala likaSamurai umloli wesikhombiso inkinoko yombono kwindoda
14. I-Japanese yamatay tattoo ngesandla
15. Gcwalisa iJapan yesiqhawe samarha ngekrele yombumba wekink design
Kungakhathaliseki ukuba yiyiphi into oyifunayo njengoluhlu lwe tattoo yakho, uya kulufumanisa, kwaye kukho izicwangciso ezininzi, ukusuka kwiindawo eziqhelekileyo ukuya kwixesha langoku.
16. Isiqingatha samurai yamaJapane esinekrele yombono we-tattoo ngcamango yeebhinqa
17. I-half sleeve i-samurai tattoo ingcinga yabantu
Ukujonga ukuba lowo ukhethayo uyona ukhuseleke kakhulu, kufuneka ufune ezinye izinto eziphambili.
18. I-Samurai iqhawe lomkhosi kunye nekrele le tattoo lamadoda
19. Amazing amazing back samurai warrior tattoo design ink
20. I-Samurai inkemba ye-tattoo ingcinga yabantu
21. I-half sleeve enemibala ye-samurai yamaqhawe emfazwe yaseJapane
22. Isiqingatha sakwaSamurai isigorha esinemikhono yombono we-tattoo ingcinga yabantu
23. Ukuphakama kwelanga kunye ne-Samurai warrior design tattoo kwi-shoulder shoulder
24. Ama-Samurai aseJapane amaqhawe e-tattoo adibanisa kumadoda
i tattootatto flower floweri-tattoosihoi fish tattoosibiniiidotizinyonitattoostattoos zohlangacute tattoosTattoos zeJometritattoicompass tattooizifuba zesifubai-cherry ityatyambobathanda i tattoosutywala tattootattoos kumantombazanatattoos zelangazengalo zengaloIndlovu yeendlovutattooizithunywa zezulutattoos zenyangaiifatyambo zeentyatyambongesandlazomculo tattoosdesign mehnditattooiifotto zentamotatna tattootattoosiimpawu zezodiac zempawutattoosIintyatyambo zeTattootattoos kubantungombonotattoo yamehloiipattoostattoo engapheliyoiifoto eziphakamileyotattoostattoo yedayimaniizigulaneI-Ankle Tattoostattoos ezinyawoowona mhlobo womhloboIintliziyo zeTattoosukutshiza amathambotatto tattoos